Tsy fandriam-pahalemana : Resy ny governemanta Ntsay -
AccueilRaharaham-pirenenaTsy fandriam-pahalemana : Resy ny governemanta Ntsay
02/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Miraviravy tanana tsy mahita izay horaisina ny governemanta Ntsay, manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana, saika manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Isan’andro mantsy dia misy hatrany, na fanafihana mitam-piadiana, na vonoan’olona tsotra izao noho ny fanendahana. Eny fa hatreny amin’ny fefin’ny Antenimieram-pirenena aza efa misy manantona fatin’olona mampiahiahy ankehitriny. Ity farany izay rakotra mpiambina noho izy voasokajy ho faritra mena satria lapam-panjakana, nefa dia nahitana izany tranga izany.
Tsy mifidy toerana hanakorontanana intsony ireo mpanao ratsy eto an-drenivohitra ankehitriny, ka mampihorohoro ny vahoaka malagasy. Tsy azo antoka intsony ny fandehanana mamonjy ny asa aman-draharaha andavanandro noho ny hafitsok’ireo mpanendaka. Ireto farany izay lasa nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika rehefa manao ny asa fanendahana, ka miafara amin’ny faty olona hatrany. Mandry tsy lavo loha ihany koa amin’ny alina noho ny ataon’ireo mpamaky trano, izay sady efa mibata ireo entana rehetra, no mbola manolana sy mamono izay hitany ihany koa. Tsy ny eny an-drenivohitra ihany, fa mitondra faisana ihany koa ireo miaina any amin’ny tontolo ambanivohitra. Efa lasa maka an-keriny indray mantsy ireo ireo nantsoina tamin’ny anarana hoe Dahalo. Izany hoe akoatra ny fangalarana omby, dia maka olona ihany koa izy ireo, ary mitaky volabe ho famotsorana izany, toa ilay nitranga tany amin’ny distrikan’i Tsaratanàna, sy Maevatanàna. Efa lasa fahazaran’ny rehetra ankehitriny ny mandre fa matory any antsaha ireo mponina amina faritra iray amin’ny alina, noho ny fanafihan’ny Dahalo. Mihorohoro fatratra araka izany ny rehetra, satria tsy manana vahaolana maty paika hiarovanana ny vahoaka sy ny fananany ny Governemanta ankehitriny, raha toa ka nalaza tamin’ny fanaovana ny ezaka “RRI” ny Praminisitra teo aloha.
Sady efa tsy manana paikady matotra entina mametraka fandriam-pahalemana eto Madagasikara, ny governemanta tarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian izay an’ny MAPAR, fa mbola manakorontana ihany koa ireo olom-boafidy mpikambana ao anatin’ity Antoko ity. Tsy nisy izay tsy nahafantatra mantsy ny Depiote MAPAR, no fototr’ilay fanakorontanana nitranga tany Morondava farany teo. Tsy mahagaga araka izany raha toa ka tsy mahita vahaolana amin’izao tsy filaminana miseho lany etsy sy eroa izao ny Governemanta Ntsay. Sarotra ho an’ny olona efa zatra manakorontana mantsy no hitondra filaminana, ary tranga tsy azo inoana mihitsy izany. Ny mpanakorontana, dia ny manakorontana sy ny mamboly izany ihany no hainy.
Tsy omena tsiny izany ny vahoaka Malagasy, raha mahatsapa fa miaina toa ny tamin’ny fotoan’ny Tetezamita isika ankehitriny. Tsy tokony hohadinoina anefa, fa vao iray vola lasa izay no niaina tamim-pilaminana izy ireo. Izay hoe vao iray volana monja no nomena fahefana ny MAPAR, dia efa miverina sahady ireo niainana rehetra tamin’ny fotoan’ny Tetezamita. Manjaka ihany koa ny gaboraraka eo amin’ny fitantanana, fa nohamaivanina ny fitsinjovana ny vahoaka eny ifotony. Natao tsinontsinona ihany koa ny fiahiana azy ireo, na dia amin’izay farany kely monja dia ny filaminana aza.
Mampametra-panontanina ankoatra izay ny ho avin’ny fanatanterahana ny fifidianana, noho izay fihetsika asehon’ny governemanta izay. Anisan’ny asa goavana nandidian’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana azy mantsy, ny fametrahana filaminana mialoha, mandritra, ary aorian’ny fifidianana. Ny mialoha aloha dia efa tsy tratra ny tanjona. Azo antoka izany fa handeha any amin’ny tsy izy ny manaraka rehetra.
Ho feno 14 taona amin’ny sabotsy 7 Janoary ho avy izao ny niandohan’ny fianjeran’ny fitondrana Didier Ratsiraka. Vaky tamin’io marainan’ny 7 Janoary 2002 io ny barazin’ny mpitandro filaminana namefy ny kianjan’ny 13 May. Niara-dia tamin-dRavalomanana ...Tohiny